မိုင်းကိုးကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ရေလွမ်းမိုးမူများဖြစ်ပေါ် | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
မိုင်းကိုးကျေးရွာ အုပ်စုတွင် ရေလွမ်းမိုးမူများဖြစ်ပေါ်
Posted on September 6, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	စက်တင်ဘာ၅ရက် ညပိုင်းမှစတင်ကာ စက်တင်ဘာ၆ရက် နံနက်ပိုင်းအထိအဆက်မပြတ်မိုးရွာသွန်းပြီး တောင်ကျရေများစီးဆင်းမှုကြောင့် တာချီလိတ်မြို့နယ်မိုင်းကိုးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မိုင်းကိုး၊ ဆီလီငေါက် ၊ မောတွီ ကျေးရွာများအပါအ၀င် ကျေးရွာအချို့တွင် ရေအမြင့်၎ပေခန့်တက်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့် လူနေအိမ်များ၊စိုက်ပျိုးပြီးလယ်မြေများ ရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီး တာချီလိတ်-ကျိုင်းတုံပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၏အစိတ်အပိုင်းအချို့တွင် ရေအမြင့် ၁ပေမှ ၁ပေခွဲခန့်အထိ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရသည့်ကျေးရွာများသို့ တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသောင်းတင်ထွေး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး နေမျိုးထွဋ် ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးရဲထူးတို့ ဦးဆောင်သည့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ၊တပ်မတော်သားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သန္ဒေနှင့်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ ၊ လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့များမှ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ပေးကြကာ သောက်ရေသန့် ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ကြက်ဥနှင့်အစားအစာများအား ဝေငှထောက်ပံ့ကူညီကြပါသည်။
ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် လယ်ယာမြေများပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး လူနေအဆောက်အဦများထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ကျွဲ-နွား-လူသူသေဆုံးမှု ၊ ပျောက်ဆုံးမှုမရှိကြောင်းနှင့် စက်တင်ဘာ ၆ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရေတဖြေးဖြေးစတင်ကျဆင်းနေပြီဖြစ်ကာ ရေဘေးသင့်သူများအတွက် တာချီလိတ်မြို့ သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသောက်ရေသန့်များ၊ အဆွေတော်မီနီမတ်မှ ခေါက်ဆွဲခြောက်များနှင့် လူမှုကူညီရေးအသင်းများမှ အစားအစာများဝေငှ ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တာချီလိတ် သတင်းလွှာ Share this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...
This entry was posted in တာချီလိတ် သတင်း. Bookmark the permalink.
← Network Monitor Mini Pro (Android)	Free call နဲ့ massage အတွက် imo v 3.8.4 →